Wasladda DAHABKA Ah Ee Dawladda Deegaanka Soomaalida, Dooddiisu Waa Gar! - Jigjiga Online
Jigjiga (JigjigaOnline) – Dood oo fagaaraha kaalay, ha daalin e soco oo isku day inaad qanciso dadka illaa daqiiqadda ugu dambaysa si aad damacaaga iyo hankaaga ugu hesho taageero; ha noqonnin mid buurta ka raadiya waxa daaraddiisa uu ka helayo. Waa dood gar ah oo uu bedka keenay Wasladda Dahabka ah ee uu nasiibka u yeeshay DDS, ahna dunta xariirta ah ee aynaan sannadihii hore ku arki jirin goleyaasha siyaasadda balse doorkan horteenna fadhiya.
Maxamed Muxumed Colaad, waxa uu toddobaadkan inoo ibo-furay dood duur-xul ah oo cid kasta ku socota, una dhigan qaab cilmiyeysan oo ay ka muuqatay aqoon iyo hab-qoraal xeel dheer. Sadarrada uu ku duugay qalinkiisa oo qof walba ku socday, kuuguma yeedhinin go’aanka kama dambaysta ah ee aad qaadanayso, laakiin sida aqoontu inoo sheegayso, waxa uu kuu daayey doorashadaada iyo jidka ay tahay inaad raacdo (your final judgment).
Haddii aad tahay siyaasi wax doonaya, waxa uu kuu iftiimiyey halka ay tahay inaad wax ka doonto, tubta kuu habboon iyo dood ku dhisan daliillo cadcad oo aad ku hanan karto hammigaaga.
Hadda dhugo sadarkan: “Marka, waxaan tallo wax ku ool ah sad uga dhigi lahaa cid waliba oo damac siyaasadeed sadriga ku haysa iyo sidoo kale, cid waliba oo saluug ka qabta geeddi socodkeenna siyaasadeed inay guntiga dhiisha uga dhigato sidii ay uga gadi lahayd shacabka deegaanka fikir walba oo siyaasadeed oo ay markaasi u aragto inay maslaxo ugu jirto umaddan.”
‘Intaasi wixii Dheer waa Hal Bacaad lagu Lisay, Annana Huf iyo Been baanu Nidhi! Mohamed Olad Oo Ka Hadlay Arrimo Muhiim Ah
Inkasta oo aanu abwaan ahayn, haddana miyaanay si uun isku shabbihin kalmadahan, maansadii DABA-TAXAN ee AHU Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac (Garriye), tuducii uu ku lahaa:
Door bay ku leedahay.
Darsa eelka lama odhan.
Danni baana igu jira
Inaan hoosba loo deyin.”
Afar su’aalood oo xigay ayuu Colaad kuugu tilmaamay halka aad hillaada ka bilaabayso, hoosna waxa uu ka raaciyey badheedhe ah, inay kuu habboon tahay inaad bedka is keento, adiga oo sayladda ka gadaya aaraa’da aad binada uga dhigayso hanka kugu jira, tabashadaada iyo muujin aad farta ku fiiqayso halka ay ahayd in la maro & waliba dalabta aad rumaysan tahay inuu yeeshay halgankii lasoo galay ee lagu riday dhiigyo-cabkii.
Soomaalidu waxay ku maah-maahdaa ‘Gari Allay taqaanaaye’, miyaanay dooddani Gar ahayn?
Haddii caaddifad xor laga yahay, haddii ninna aan dano gaar ah laga eegayn, Allaylehe, waa gar iyo biyo kama dhibcaan, waana midda ay tahay, in siyaasiyiintu ku salleeyaan damacooda.
Aan xasuusiyo cid walba, in danteenna guud laga sinnaado, kala duwanaanshaha aaraa’da iyo siyaasadduna ay tahay sunne bannaan oo ay tahay inaan laysku colaadin, kamana dhigna in ninka kursiga ku fadhiya uu yahay mid samada laga soo diray oo la’aantii dalku rogmanayo. “
Gaarriye AHU ayaa laga hayey:
Ninka deyrtan maanta ah
U darraystay madaxnimo
Uba diidi maynnee,
Horta mee dadkii iyo
Dalkii uu xukumi laa?
Nin la yidhi na daadihi
Haddii layska dabo galo
Oon doohba cidi odhan
Maxaa ii dammaanad ah
Inaan lagu durdurinayn?
Damman wayska huruddaa
Xeerka loo dejinayiyo
Inaan qalinka lagu dagin?
In dastuurka qiil jiro
Markay damacdo lagu furo?
Nin doonaa ha mehershee
Inuu daacad yahayoo
Ajeenda u dahsoonayn?
Qaran dumay inuu yahay
Nin dalluun ka bixin kara?
Dabka inuu ka dhigi karo
Dabatadu ka siman tahay?
Ma deggena badweyntuye,
Duufaan hadduu kaco
Inuu doonni noqon karo,
Seebab lagu dabaasho leh?
Calankaan dorraad helay
Dafo igala booddaa
Kula maqan Dagaara e
Ninka doobta ridayaa
Sida haad ma duulaa?
Midho daray haddaan beri
Duudduub ku liqi jirey
Doorkan waxaan hubsanayaa
Dirxi inuu ku hoos jiro.”
Waxa qoray: Abdiwahab Ahmed, tifaftiraha guud ee JigjigaOnline.com
Previous Dagaal toos ah ma dhexmari karaa Sacuudiga iyo Iiraan?
Next Ilhaan oo dalab u dirtay shacabka Israa’iil xilli Netanyahu uu wajahaya doorasho adag